जुस पसलेलाई समेत कार्वाही Kasthamandap Daily
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट विश्व आक्रान्त छ । नेपाल पनि त्यसको अत्यन्त प्रभाव परेको छ । मुलुक अहिले पनि लकडाउनमा नै छ ।
यो समाचार तयार पार्दा नेपालमा आज मात्र १८९ जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार २४ वटा साना उद्योगलगायतलाई विहानदेखि साँझ सम्म खोल्न छुट दिएको छ । त्यसमा जुस पसलदेखि अन्य पनि पर्दछन् । तर त्यसमा सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख पनि छ ।
तर, काठमाडौंको मित्रपार्कस्थित दीर्घायु गुरु हस्पिटल एण्ड रिर्सच सेन्टरमा रहेको दीघायु फलफुल तथा जुस सेन्टरलाई नेपाल प्रहरीले बन्द गर्न उर्दी नै लगायो । ‘विहान मात्र हो खोल्ने साँझ खोलेको थाहा पाए भने त्यसको नतिजा नराम्रो’ हुने समेत भने ।
जुस सेन्टरका सञ्चालक रहेका दिपेन्द्र सुवेदीले यस काष्ठमण्डप डेलीलाई बताए अनुसार ‘सरकारले जुस पसललाई त खोल्न दिएको छ होइन र ? भनेर प्रति प्रश्न समेत गरे । उनले ‘नेपाल अधिराज्यभरका भाटभटेनी खोल्न हुने तर हाम्रो यो व्यवशायलाई मात्र नेपाल प्रहरीले आँखा लगाउने ?’ भने । उनका अनुसार ठुला बडाको जहाँ नि पहुँच हुन्छ, हामी जस्तो मध्यम वर्गलाई मात्र हो पुलिस प्रशासनले हेप्ने ? हाम्रो करबाट सरकार र प्रशासन चलिरहेको छ भने हामीलाई मात्र किन पिडा ? उनले गुनासो पुखे ।